जहाँ ठाउँमा राम्रो मान्छे पूरा गर्न सक्छन् एक राम्रो केटी
राम्रो मान्छे अक्सर महसुस मा पक्रेको बीच दुई चरम बैठक एक राम्रो केटी एक पल्ट मा क्लब वा एक अनलाइन डेटिङ सेवा । जबकि म केही थाहा, मित्र थियो जसले सफलता दुवै मैदानहरू मा, विशिष्ट राम्रो मान्छे आदर्श पूरा गर्न चाहन्छु आफ्नो सपना को केटी मा आफ्नो. जहाँ छ राम्रो मान्छे ? यो ठाँउ तपाईं सबैभन्दा सहज महसुस. तपाईं आफैलाई हुन कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ भने, उनको ध्यान किन छैन केही ठाउँमा आफ्नो राम्रो केटी हुन सक्छ प्रतीक्षा । ठाउँमा जहाँ एक राम्रो मान्छे पूरा गर्न सक्छन् एक राम्रो केटी दिनुपर्छ तपाईं एक सुरूवात ठाँउ । जबकि माध्यम हिँडिरहेका को पहिले केही हप्ता, एक मित्र र मलाई हेर्नुभयो एक मान्छे आउन चलिरहेको जिम बाहिर सोध्न एक केटी को लागि.
त्यो अँगाली, र उहाँले मिल्यो अंक छ । आफ्नो केटी हुन सक्छ मा ला फिटनेस, वा. बक्स बाहिर लाग्छ विशिष्ट सुविधा पनि छ । केही प्रयास वर्ग, इनडोर रक चढाई, सफ्टबल लिग, वा बाहिरी ट्रेल्स. साँच्चै साहसी प्रयास, योग, र निश्चित कार्डियो बेर्रे (‘मात्र यार). मेरो साथीहरू आफ्नो पत्नी फेला चलिरहेको बेला, सिढी मा सान्ता मोनिका. म उपस्थित अदृश्य छोराछोरीको चौथो सम्पत्ति शिखर केही सप्ताह पहिले, र म भन्न चाहन्छु दर्शक को थियो बालिका । बस कुनै पनि बालिका, यद्यपि. यी जवान महिला जो एक फरक बनाउन चाहनुहुन्छ. कि संग किसिमको को महिला अनुपात गर्न पुरुष, एक राम्रो केटा बाध्य छ पत्ता लगाउन आफ्नो सपना केटी पछि लाग्न. भेट आफ्नो केटी मा यो ल्याटिनो नेतृत्व सम्मेलन । कलेज मा, विचार संलग्न रही ग्रीक संगठन, क्याम्पस, आदि. आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शर्त छ, बारम्बार एक स्थान छ । टेबल सबै लिया छ, त्यसैले तपाईं जाँदैछन् छौं साझेदारी गर्न एक स्थान । किन छैन शेयर एक स्थान संग केटी तपाईंले गर्नुभएको थियो आफ्नो आँखा मा? म पहिले विवाह भएको थियो, म थियो धेरै एक मित्र को मजा बनाउन को लागि मलाई सोधेर के पुस्तक एक केटी थियो पढाइ । तल लाइन छ, यो काम हुनुहुन्छ भने निष्कपट छ । यो प्रयोग. राम्रो बालिका प्रेम गर्न बच्चाहरु र एक को रूप मा राम्रो मान्छे, त्यसैले तपाईं के. आफ्नो क्षेत्र मा? यहाँ ला, त्यहाँ छ एक समूह भनिन्छ, रातो आँखा, जो गर्छ गतिविधिहरु हरेक शनिबार संग मा-जोखिम युवा । तपाईं छक्क हुन सक्छ कसरी धेरै गुणवत्ता बालिका बाहिर आउन हरेक हप्ता बाहिर मदत गर्न । त्यहाँ हुन सक्छ गतिविधिहरु आफ्नो समुदाय मा तपाईं व्यस्त प्राप्त गर्न सक्छन् साथै मा जस्तै रोनाल्ड म्याकडोनाल्ड घर, मानवता को लागि आवास, एक साक्षरता परिषद, आदि. तपाईं भावुक बारेमा एक निश्चित कारण छ? तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् एक राम्रो केटी जसले एउटै राजनीतिक विचार र नापसंद रूपमा तपाईं. प्राप्त संलग्न एक निर्वाचन अभियान । हेर लागि रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक पूरा-माथि समूह आफ्नो क्षेत्र मा. यहाँ केही उदाहरणहरू छन् को अन्य समूह धाउन चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूले: सियरा क्लब, मानचित्र, अमेरिकी मधुमेह संघ, या पनि छ । यो जोडी खेल्छ भनेर, सँगै रहन्छ सँगै । मलाई थाहा छ एक अस्पताल निर्देशक भेट गर्ने आफ्नो पत्नी मा गोल्फ कोर्स.
तिनीहरूले खेल्न हरेक सप्ताह
के यी कुनै पनि स्पार्क मा चासो. प्रयास एक सुधार वर्ग, भाषा वर्ग, कुकिंग वर्ग, रक्सी-टेस्टिङ वर्ग, संगीत वर्ग, फोटोग्राफी कार्यशाला, आदि. बस लाग्छ छैन को विशिष्ट चर्च सेवा, जन, वा सभाघरमा. संलग्न प्राप्त छ । जाँच र छन् भने हेर्न एक सानो समूह वा बाइबल अध्ययन गर्न सक्छन् तपाईं धाउन । माथि हेर्न स्थानीय विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ गरेको, जवान जीवन क्लब, वा तपाईं हुनुहुन्छ भने, कलेज मा संलग्न प्राप्त. सबै भन्दा राम्रो तरिका पाउन एक राम्रो केटी हो मित्र । मा बाहिर सम्झना छैन घर दल छ । यहाँ केही तपाईं सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ छैन, जन्मदिन, पोशाक दल, या पनि खेल रात । शायद एक नदी फ्लोट यात्रा । के तपाईं कहिल्यै खेले माफिया? सबै भन्दा राम्रो को एक पार्टी खेल कहिल्यै. यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो कहिल्यै सुनेका र सिक्न चाहनुहुन्छ कसरी खेल्न । एक भन्दा बढी वर्ष पहिले म देखे, मेरो पत्नी मा एक उदारता पानी. तपाईं पाउन सक्छ एक राम्रो केटी मा एक चाड आफ्नो क्षेत्र मा पनि । एक लागि साइन अप, छोराछोरीको चमत्कार नेटवर्क गर्छ एक सबै-रात नृत्य म्याराथुन, आदि. बाहिर प्राप्त र बारेमा छ । थाह मा आफ्नो समुदाय । यो भेट्टाउने आउँदा एक राम्रो केटी, सजिलो छैन भन्दा राम्रो छ । सजिलो छ जहाँ को बहुमत, मान्छे देख छन् बनाउँछ, जो प्रतियोगिता को स्तर उच्च छ । हुन चिंताशील र रचनात्मक हुन, र तपाईं अलग हुनेछ देखि पैक । छैन उल्लेख गर्न, यी कौशल हो जा गर्न तपाईं मदत मा तल लाइन पनि । तपाईं राम्रो किस्मत, राम्रो मान्छे. मा आफ्नो साहसिक । र के छैन छौं भने तपाईं मा ती कुराहरू को कुनै पनि. के तपाईं एक पूर्ण-समय काम को खपत भनेर सबै आफ्नो समय र ज्यादातर हुन्छन् मानिसहरू । कस्तो किसिमको काम के तपाईं के । मेरो छोरा एक स्नातक छ पशुचिकित्सक र आफ्नो जीवन पनि खपत गरेर काम, त्यसैले उहाँले भेट्छन् मान्छे मा. म हुँ एक तलाकशुदा मानिस संग हुर्केका बच्चाहरु एक म छु अब थकित को द्वारा जीवित आफैलाई पछि गरेका भएको लागि त यो गत वर्ष. र म खोजिरहेको छु एक महिला उत्प्रेरित गर्छ कि मा मेरो ढिलो गति माध्यम जीवन म हुँ छैन कुनै जल्दी मा अब छ र त म छु एक महिला खोजिरहेको छ कि कुनै पूर्व-कटिबद्ध एजेन्डा वा जिम्मेवारी गरेको छु अब सेवानिवृत्त मा विकलांगता म जस्तै रहेको ताल र हेरिरहेका डुङ्गा वा माछा मार्ने कहिलेकाहीं साँच्चै म सिर्फ आराम र सजिलो यो लिन कुनै पनि मानिस प्राप्त गर्न सक्छन् एक लाख महिलाहरु जसरी तर यो लिन्छ एक वास्तविक मानिस प्रेम महिला एक लाख तरिकाहरू छन् । एक लाख तरिकाहरू? म जस्तै ढोका खोल्न र हात पकड जबकि सडक तल हिँडिरहेका. म आनंद, अचम्मको एक महिला । वफादार, रोगी, आदरणीय, विचारशील, मिलनसार, इमानदार र रोमान्टिक छ । म हुँ एक टेड्डी भालु संग एक ठूलो हास्य को अर्थमा छ । म छु एक परिष्कृत अझै तल पृथ्वीमा मानिस प्राप्त गर्ने प्रकृति यात्रा, अनुभव, नयाँ संस्कृति, मा रहेको घर र परिवार संग समय खर्च, मित्र, मनोरञ्जनात्मक सँगै, संगीत सुनेर, मोमबत्ती, रोमान्स, दल, नृत्य, चकलेट, रक्सी, पनीर, रोटी, म हुँ एक विदुर र म हराएको मेरो पत्नी, तीन वर्ष पहिले तर अब गर्न चाहनुहुन्छ छ एक आनन्दित अन्त्य तर म एक बच्चा सँगै जीवित व्यक्ति म आशा पूरा हुनेछ स्वभाविक, इमानदार र खुला दिमाग जो कसैले गर्न रुचि, कुराकानी प्रकारको छ, न्यानो, बुद्धिमान, र विश्वस्त छ । सम्बन्ध कहाँ हुनेछ मजा, हाँसो, मित्रता, प्रेम र आपसी आदर, म छु सीधा व्यक्ति, र म निर्माण गर्न चाहन्छौं राम्रो मित्र सम्बन्ध पछिल्लो जो लामो र समाप्त हुन्छ कहिल्यै कसैले संग दयालु र राम्रो छ, मलाई थाहा छ तपाईं बाहिर छन् र यो समय को बस एक कुरा अघि, हामी प्रत्येक अन्य पाउन म अगाडी देख छु त्यो दिन सबै संग मेरो हृदय । कफी पसल, जिमहरु, र दल छ । यी जस्तै लाग्न भयानक ठाउँमा पूरा गर्न एक राम्रो केटी छ । यी तीन ठाउँमा ठूलो हो भने तपाईं चाहनुहुन्छ एक उदार (यौन), छवि सचेत (व्यर्थ र), वा एक पार्टी (अपरिपक्व र).
तर एक राम्रो केटी छ । कुनै
म अनुमान यो निर्भर जो कफी पसल वा जिम छ । तर तपाईं साँच्चै गलत जान सक्दैन घर दल छ । जोनडेय यहाँ । मूल्यांकन जवाफ । म भन्न छ, म मा हेर्न गर्नुपर्छ शौक वर्ग र स्वयं, साँच्चै राम्रो सुझाव छ । प्रकारको काँतर बारेमा हुनत यो छैन किनभने भरोसा कमी, तर एक हेर्नुहोस् को बिन्दुबाट, जवान बालिका यी दिन. उदार छैन बराबर यौन, र रूढिवादी वा मसीही बराबर छैन राम्रो छ । म एक नास्तिक र एक उदार, र म माथि छ घोर. मलाई थाहा छ धेरै राम्रो बालिका जो कफी पिउन र बाहिर काम. कुनै रेकर्ड छ वा कि प्रमाण महिलाहरु कहिल्यै प्रेम कुनै पनि मानिसहरू । सधैं महिला पछि चलान कुरा देखि प्राप्त गर्न पुरुष लागि मानिस । कुनै जवाफ मा यो कि बाटो केही महिला छ । यदि म, जो एक पाउन राम्रो छ र चाहनुहुन्छ राम्रो सम्बन्ध, त्यसपछि म खुसी छु. नृत्य कक्षाहरु छन् लागि एकल: यो हुनेछ ज्यादातर महिलाहरु र तपाईं प्राप्त गर्न माथि जोडी र. प्लस रूपमा, एक जीवन कौशल यो पिटे सकिँदैन, एक महिला को धेरै जान गागा लागि एक मान्छे जो गर्न सक्छन् नृत्य । सबै अंक राम्रो हो, कुनै शंका छ । म छु सरल मान्छे । छैन कुनै सम्बन्ध छ । म खुसी छु एक्लै । र आराम महसुस एक्लै ।
← डेटिङ साइट बेल्जियम पंजीकरण बिना मुक्त डेटिङ साइट